Puntland oo beenisay inay wax ka ogtahay siideynta markabkii Talyaaniga, caddeysayna in la baxshay madaxfurasho. [Akhris …] – Radio Daljir
Puntland oo beenisay inay wax ka ogtahay siideynta markabkii Talyaaniga, caddeysayna in la baxshay madaxfurasho. [Akhris …]
Agoosto 10, 2009 12:00 b 0
Garowe, Aug 10 – Dawladda Puntland ayaa beenisay inay wax lug ah ku laheyd siideynta markab lagaleeyahay dalka Talyaaniga oo shalay galinkii dambe ay sii daayeen kooxo burcadbadeed Somali ah.
Wasiirka Kulluumeysiga ee Puntland Maxamed Faarax Aadan oo u warramey idaacadda Daljir ayaa sheegey inaysan waxba kale socon siideynta markabkaasi, ayna arrintaan faraha kale bexeen markii dawladdu talyaanigu ay diiday in Pl ay xoog ku soo furato markaabkaai oo muddo afar bilood ah lagu heystay duleedka magaalada Laasqoray ee ggobolka Sanaag.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegey in la baxshay shan million oo doollar (5,000,000$) oo madaxfurasho taasi oo Puntland aad uga xumaatay maadama ay soo kordhineyso fasahaad ku sii baaha deegaanka, waxaana uu intaasi ku sii daray wasiirku in Puntland aysan awood u laheyn inay si dhameystiran u soo afjarto burcadbadeedda.
Maxamed Faarax Aadan ayaa mar kale ku celiyey baaq ay horay u soo saartay PL oo waxgaradka looga codsanayey in hal dhinac looga soo jeesto Burcadda.
Hadalka wasiirka ayaa yimid iyadoo wasiirka arimaha dibadda ee Talyaaniga uu sheegey in dawladdaha Somaliya, Puntland iyo Talyaanigu ay iska kaashadeen siideynta markabkaasi.
Markabkaan la siidaayey oo jiidaya haamo waaweyn oo aan la aqoon waxa ku jira ayaa ku sii jeeda dalka Jabuuti isagoo ay galbinayaan koox ka tirsan maraakiibta shisheeya ee la dagaallanka burcadda badaha ee jooga xeebaha Somaliya.
Axmed Shiikh Maxamed (Tallman)
Ammaaanka magaalada Galkacyo oo aad loo adkeeyey. [Akhris …]
Nabadoon C/casiis M. Yusuf oo aan ka waraysanay kulan nabadoonada Puntland uga socda Garowe. [Dhegaysi …]